Abavelisi beebhotile zeglasi abenzi beGlasi, abaXhasi - iBhotile yeBhotile yeoyile eyi-China
I-100ml ye-cobalt yeglasi eluhlaza okwesibhakabhaka ngebhotile yokuhambisa ioyile kunye nesiciko se-CR somntwana
Sebenzisa iibhotile ezineglasi zepipette caps ukugcina uluhlu lweemveliso kunye nezisombululo, kubandakanya iioyile ezifanelekileyo kunye neoyile yokuphatha, iziqholo, unyango lweentyatyambo zeBach, izisombululo kwezempilo, kunye nokunye. Iglasi eluhlaza okwesibhakabhaka yindlela elula nesebenzayo yokubonelela ngeemveliso zakho ngenkangeleko ekumgangatho ophezulu, ngaloo ndlela uqinisekisa ukuba wena kunye neemveliso zakho ziphambi kokhuphiswano ngelixa utsala umdla wabathengi abanokubakho.
Ibhotile yeglasi ecacileyo eyi-50ml
Khusela, bonisa kwaye usasaze ivumba lakho kunye nesiqholo kwiibhotile zeglasi ze-Easypack. Le bhotile yokuthambisa yeglasi ye-50ml icacile kungcelele lwethu lwedrophu kwaye ilunge kakhulu kwezempilo nakwimveliso yamayeza. Iglasi ngaphaya unako ukuphucula umgangatho imveliso kunye nokubonakala. Kufanelekile kakhulu ukuba wena kunye nabathengi bakho nibe nokukhawulezisa ukwahlula incasa / ivumba. Icala elichanekileyo lebhotile lenza kube lula ukongeza ileyibheli / ukushicilelwa kwescreen sakho.
I-20ml yeglasi eluhlaza kunye nebhotile yeoyile efanelekileyo kunye nesiciko sokunciphisa i-drop
Uluhlu lwethu lwebhotile yeglasi esiya kuqinisekisa ukhuseleko olufanelekileyo kwiimveliso zakho, ukubonakala okugqibeleleyo kwaye zilungele abathengi bakho. Ibhotile yeglasi eluhlaza engama-20ml enebhotile yokutshixa engabonakali nje ngokumangalisayo, kodwa ikwabonelela ngendlela efanelekileyo yokuhambisa imveliso ngokuchanekileyo. Oku kungenxa yesilayidi esicothayo esifakwa kwikepusi, esivumela imveliso yakho ukuba ikhutshwe ngohlobo lwamathontsi. Ilungele kakhulu iioyile ezifanelekileyo zexabiso kunye nemixube yearomatherapy.
Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Sula iibhotile Pump Pump,